Kuumba muchina fekitori - China Kuumba muchina Vagadziri, Vatengesi
Otomatiki Powder richigadzirisa Machine (SUKO-20T-05)
1. Hunhu hwe PTFE Kuumba Muchina Kuumba Machines akapatsanurwa kuita echinyorwa, semi-otomatiki uye akazara otomatiki ekugadzira michina. Kuburikidza nekuenderera mberi kwekuvandudzwa kwetekinoroji yekuumba, michina yacho yakanyanya kuchenjera, kugadzikana, uye kuita basa. Iyo yakangwara otomatiki mhando inodzorwa ne PLC system, kumisikidza kumanikidza, renji, kumhanya, huwandu, uye kugara nguva, uye mashandiro ari nyore. Nemhando dzakasiyana dhizaini, iyo michina inogona kusangana nezvinodiwa zvakasiyana zvevashandisi, ...
Otomatiki Powder richigadzirisa Machine (SUKO-3T-01)
Otomatiki Powder richigadzirisa Machine (SUKO-60T-05)
Sezvo PTFE isingayerere pamusoro peyakanyungudika, haigone kuumbwa jekiseni uye inoda matekiniki ekugadzirisa. Kuumbwa PTFE kunogadzirwa nekutanga compression kuumba iyo poda kuva preforms, uyezve sintering iyo preforms mune imwe nzira yakafanana neye sintered simbi yekugadzirisa. Maitiro aya anogadzira maumbirwo ejometri ayo anogona kugadzirwa, kusanganiswa, uye / kana kusunganidzwa. Chigadzirwa Tsananguro yeAutomatiki Kuumbwa: otomatiki kuumbwa, semi-otomatiki fomu yekumanikidza kuumbwa, ndiyo nzira ...
Otomatiki PTFE Hydraulic Press Kuumbwa Muchina